Garsoore jooga Hawaii oo joojiyay amarka cusub ee socdaalka ee Madaxweyne Trump - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldGarsoore jooga Hawaii oo joojiyay amarka cusub ee socdaalka ee Madaxweyne Trump
Garsoore jooga Hawaii oo joojiyay amarka cusub ee socdaalka ee Madaxweyne Trump
March 16, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Garsoore jooga Hawaii oo joojiyay amarka cusub ee socdaalka ee Madaxweyne Trump. [Sawirka: Archive]
Washington-(Puntland Mirror) Garsoore federaal oo jooga Hawaii ayaa mamnuucay amarka cusub ee socdaalka Madaxweyne Donald Trump, saacado kadib markii amarkaas uu bilaabmi lahaa xalay oo Khamiis ahayd saq dhexe.
Garsoore degmo oo la dhaho Derrick Watson ayaa sheegay in cadayntu uu muran ka jiro taasoo ay dowladdu sheegtay in mamnuucidu ay tahay arrin la xiriirta ammaanka qaranka.
Amarka ayaa socon lahaa muddo 90-beri ah, waxaana uu mamnuucaya dadka ka imaanaya lix wadan oo Muslim ah oo kala ah: Soomaaliya, Suuriya, Liibiya, Suudaan, Yeman iyo Iran.
Trump ayaa ku adkaysanaya in amarkan uu Mareykanka ka joojin doono in ay soo galaan argagixisada, balse dhaleecaynta ayaa sheegaysa in ay tahay tagoor.
Hawaii ayaa kamid ah dhowr dowlad goboleed oo isku dayaya in ay joojiyaan amarka Madaxweyne Trump.
Garsoorayaasha ayaa ku dooday in sharcigan uu dhibaato u keenayo dastuurka Mareykanka sidoo kalena yahay tagoor lidi ku ah dadka ku sugan halkaas oo kasoo jeeda wadamada la mamnuucay.
Hawaii ayaa sidoo kale sheegtay in mamnuucida Madaxweyne Trump uu waxyeelo u geysanayo dalxiiska iyo awooda qorida ardayda iyo shaqaalaha ajaaniibta ah.
March 7, 2017 Trump oo saxiixay amar cusub oo muwaadiniinta ka soo jeeda lix dal oo Muslim ah looga mamnuucayo soo gelitaanka Mareykanka
Ugu yaraan 25 oo ku geeriyooday qarax is-miidaamin ah oo ka dhacay caasimada Suuriya
At least two Puntland soldiers wounded in exchange of gunfire with pirates near Alula coastal area
Xasan Shiikh oo sheegay in fadhiga kowaad ee baarlamaanka uu dhici doono 15-ka December
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa cadeeyay in fadhiga kowaad ee baarlamaanka Soomaaliya uu dhici doono 15-ka bishaan December. “Kulanka kowaad ee baarlamaanka waxa uu dhici doonaa 15-ka December, sida qorshuhu yahay.” Xasan [...]